30 Mar 2020 | सोमबार, १७ चैत, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
वर्षाको कारण भारतविरुद्धको खेलमा न्यूजिल्याण्ड अभागी !
एजेन्सी । विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा भारत र न्यूजिल्याण्डबीचको खेल वर्षाको कारण अवरुद्ध भएको छ । मंगलबार दिउँसो म्यान्चेस्टरमा भएको खेलमा टस जितेर न्यूजिल्याण्डले ब्याटिङ गरेको थियो । न्यूजिल्याण्डको ब्याटिङ सकिनै लाग्दा वर्षाको कारणले खेल रोकिएको थियो । न्यूजिल्याण्डले ४६.१ ओभर खेल्दै ५ विकेटको क्षतिमा २११ रन बनाएको छ । जसमा उत्कृष्ट लयमा रहेका क्याप्टेन केन विलियमसनले ९५ बलमा ६७ रनको योगदान दिँदै आउट भएका थिए भने अर्का भरपर्दा ब्याट्सम्यान रोज टेलर ८५ बलमा ६७ रनको योगदानी दिँदै खेल्दै थिए तर प्रतिकूल मौसमले गर्दा वर्षाका कारण खेल रोकियो । उनलाई टम लाथमले ४ बलमा ३ रन खेल्दै साथ दिएका छन् ।
जित्नै पर्ने दबाबमा इंग्ल्याण्ड, भारतलाई पाकिस्तानी शुभेच्छुकको पनि समर्थन !
काठमाडौँ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेटमा आज महत्वपूर्ण खेल हुँदैछ । दिउँसो सवा ३ बजे (नेपाली समय अनुसार) एजबास्टन क्रिकेट मैदानमा हुन लागेको खेलमा आयोजक राष्ट्र इंग्ल्याण्डले विश्वकपको एकमात्र अपराजित टिम भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ।
विश्वकप क्रिकेटमा भारतमात्रै एक्लो अपराजित टिम, वेष्ट इन्डिजको यात्रा समूह चरणमै सीमित
काठमाडौँ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा भारतले अर्को जित पनि दर्ता गरेको छ । बिहीबार राति सम्पन्न खेलमा वेष्ट इीन्डजविरुद्ध भारतले १२५ रनको जित निकालेको हो । सुरुमा ब्याटिङ गरेको भारतले ५० ओभरको समाप्तीमा ७ विकेट गुमाउँदै जम्मा २६८ रन जोडेको थियो । भारतको लागि सर्वाधिक रन बिराट कोहलीले जोडे । उनले ८२ बलको समाना गर्दा ७२ रन बनाए । त्यस्तै, महेन्द्र सिंह धोनीले पनि ५६ रन जोडे भने केएल रावलले ४८ तथा हार्दिक पाण्डेयले पनि ४६ रन जोडे ।
अफगानिस्तानविरुद्ध भारतको कठिन जित
काठमाडौँ । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतले अफगानिस्तानविरुद्ध कठिन जित निकालेको छ । शनिबार सम्पन्न खेलमा भारतले ११ रनले विजयी भएको हो । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले ८ विकेटको क्षतिमा २ सय २४ रन बनाएको थियो । भारतका लागि विराट कोहलीले सर्वाधिक ६७ रन जोडे । केदार जाधबले ५२ रन, रोहित शर्मा एक रनमा पवोलियन फर्किए, एल राहुल ३० रन, विजय शंकर २९ रन, महेन्द्र सिंह धोनीले २८ रन जोडे ।
भारतमा अत्यधिक गर्मी, गुडिरहेकै रेलमा चार जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतमा विगत दुई हप्तादेखि बढेको ‘अत्यधिक गर्मी’का कारण राजधानी नयाँ दिल्लीबाट झाँसी गइरहेको केरला एक्सप्रेसको रेलभित्रै चार जना यात्रीको मृत्यु भएको मङ्गलबार भारतीय अधिकारी तथा प्रत्यक्षदर्शी यात्रुले बताएका छन् । मृतक रेलयात्री चारैजनाको अत्यधिक गर्मीका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ । मृतकमध्ये एक जना ८१ बर्षीय वृद्ध भएको पनि बताइएको छ ।
शक्तिशाली अष्ट्रेलियाविरुद्ध आजको खेलमा भारतले जित निकाल्न सक्ला ?
काठमाडौँ । विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज एक रोमाञ्चक खेल हुनेछ । आज उपाधिका दावेदार राष्ट्र भारत र अष्ट्रेलियाबीच द ओभल रंगशालामा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ । जारी प्रतियोगितामा भारतको यो दोस्रो खेल हो भने अष्ट्रेलियाको भने तेस्रो खेल हो । भारतले आफ्नो पहिलो खेलमा साउथ अफ्रिकालाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ भने अष्ट्रेलियाले अफगानिस्तानविरुद्ध ७ विकेटको जित तथा वेष्ट इन्डिजविरुद्ध पनि १५ रनको जित दर्ता गरेको छ ।
तीन दिनमै सलमानको ‘भारत’ले सय करोडको रेकर्ड बनाउँला त ?
काठमाडौं । सलमान खानको फिल्म ‘भारत’लाई बम्पर ओपनिङ मिलेको छ । ईदको अवसरमा रिलिज भएको सलमानको यस फिल्मले दर्शकहरुको राम्रो साथ पाएको छ ।
सलमान र क्याट्रिनालाई फ्यानहरुको सुझाव– ‘विहे गर भाइजान, के हेरिबसेको ?’
एजेन्सी । अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री क्याट्रिना कैफको मोस्ट अवेइटेड फिल्म ‘भारत’ सिल्भर स्त्रिनमा छाउने तयारीमा छ । अली अब्बासद्वारा निर्देशित ‘भारत’ ईदको अवसरमा ५ जुनबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ ।
सत्ताविराेधी माहाेलका बाबजूद भाजपाले जित्नुकाे ६ कारण
नयाँ दिल्ली । भारतमा लोकसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा सत्तारुढ दल भाजपा प्रचण्ड बहुमतको दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखिएको छ ।
भारतीय चुनावमा नेपाल–भारतको संयुक्त गस्ती
बाँके । भारतमा हुन लागेको लोकसभा निर्वाचन तथा सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको दशगजामा दुई देशका सुरक्षा निकायले संयुक्त गस्ती गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको जङ्गे पिलर नं २६ देखि २९ सम्म संयुक्त गस्ती गरिएको हो ।
कुन ब्लड ग्रुपले कस्ता खाना सेवन गर्ने ?
ओः यो रक्तसमूह भएका मानिसहरुको पाचन क्रिया अन्य मानिसको भन्दा कमजोर हुन्छ । त्यसैले ओ रक्तसमूह भएका मानिसहरुले अन्न तथा गेडागुडी कम मात्रामा खानु पर्दछ ।
के गर्भवती महिलाबाट बच्चामा कोरोना भाइरस सर्न सक्छ ?
थाइराइडका रोगीले कस्ता खानेकुरा खानुहुँदैन ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसका कारण हालसमम विश्वभरी ३४ हजारभन्दा बढकिो मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै ७ लाख २३ हजारभन्दा बढी यो भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । तर, यो भाइरसबाट संक्रमित हुने पहिलो बिरामीबारे कमैलाई थाहा रहेको छ ।
कोरोनाको जन्तर बनाएर बेचेपछि...
धेरै सुन्दर केटीहरु विवाहका लागि योग्य हुँदैनन् !